Lammiileen Itoophiyaa 30 ISISn Liibiyaa keessatti ajjeefaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Lammiileen Itoophiyaa 30 ISISn Liibiyaa keessatti ajjeefaman
Sadarkaa biyyoolessatti guyyaan gaddaa 3 labsame Gocha suukkanneessaa baqattoota irratti raawwatame kana mootummaan Itoophiyaafi hawaasni addunyaan balaaleffataa jiru
Oduun gaddaa guddaan lammiilee Itoophiyaa biyyaafi biyyaan ala jiraatan hunda rifachiiste kaleessa uumame. Waa’ee isaan Afrikaa Kibbaa keessatti ajjeefamaafi gidiramaa jiraatanii miti. Waa’ee gareen Biyya Islaamaa (ISIS) jedhamu lammiilee Itoophiyaa 30 ajjeesuu isaa labsuuti kan ummata Itoophiyaafi guutuu hawaasa addunyaa guutummatti kan rifachiise.
Akka ibsa ISIS itti lammiileen Itoophiyaa kan galaafataman biyya baqaa Liibiyaa keessatti. Akka ibsa ISIS kanatti lammiilee Itoophiyaa ajjeefaman hundi kanniin amantaa Kiristaanaa hordofaniidha. Namoonni 16 qarqara galaana Mediteraaniyaaniitti kan ajjeefaman. Kudhalama ammoo gammoojjii Saharaa keessatti kan goorra’aman, akka ibsa ISIS baasetti.
ISIS maaliidhaaf tankaarfii garajabeennaa kana lammiilee Itoophiyaa irratti akka fudhate hanga ammaatti wonti ifatti beekame tokko hinjiru. Haa ta’uu malee, ‘Dhiigni Muslimootaa harka keessanitti dhangala’e rakasaa miti,’ jechuun gareen kuni ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwate kana tankaarfii mootummaan Itoophiyaa woraana isaa Somaaliyaa seensisuu isaatiin wolqabsiisuu yaaleera.
Itoophiyaan lammiileen isii ISISn ajjeefamuu har’a mirkaneessite. Enyummaa namoota ajjefaman kanaa beekuudhaaf tattaafiin godhamaa jiraachuun ibsi mootummaan baase mul’iseera. Namoota Liibiyaafi Afrikaa Kibbaatti dhuman yaadachuuf mootummaan guyyaa 3 guyyaa gaddaa jedhee labseera. Guyyaan gaddaa booruu eegaleeti kan yaadatamu.
Ob.Ridwaan kaleessa AFPtti yoo dubbatan ’kuni mirkanaaye taanaan, lammiilee Itoophiyaa Awurooppaa seenuuf imala hamaa irratti bobba’aniif barumsa ta’a,’ jedheera. Ob.Ridwaan kaleessa kanniin harka ISIS iitti kufan lammiilee Itoophiyaa ta’uun isaanii hinmirkaneeffanne jechuun isaa namoota heddu mufachiisuu isaati yaanni namoonni ‘miidiyaa hawaasaa’ irratti laataaran kan mul’isu.
Namoonni ISIS ajjeese kunniin lammiilee Itoophiyaa ta’uun erga mirkanaayee, mootummaan ISIS irratti haluu bayuun waan hinoolle ta’udha kan himamu. Kan godhuuf fageenni Itoophiyaan Liibiyaa irraa qabdu gufuu guddaa ta’uun nimala. Haa ta’uu malee, Itoophiyaan Masrii wojjiin waahiluun tankaarfii fuchuun filannoo jiran keessaa tokko akka ta’eedha ambaasaaddarri Itoophiyaa biyya Masrii Mohaammad Idriis kan dubbate. ‘Garee kana irratti tankaarfii fudhachuuf waan danda’amu hunda yaalla,’ jedhe Mohaammad Idriis.
ISIS ajjeechaa kana lammiilee Itoophiyaa irratti kan raawwate baatii 2 booda erga tankaarfii suukkanneessaa lammiilee Masrii irratti fudhateeti. Gareen ISIS Liibiyaa jiraachuu isaa addunyatti ibsuuf kan tankaarfii gara jabeennaa akkanaa fudhachuu irratti bobba’eef, jedhu taajjabdoonni.
baqattoota itoophiyaa ajjeefaman
garee biyya islaamaa
isis lammiilee itoophiyaa ajjeese
Previous articleAl Jazeera: US official praises Ethiopian ‘democracy,’ rest of world begs to differ
Next articleDhumaatii baqattoota galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruuf yaalanii 2015 keessa maaltu hammeesse?